Ngwọta - Testeck Co., Ltd.
Guangdong Rail Transit Industry na-abawanye ndị ọrụ
Companieslọ ọrụ itoolu na Guangzhou na-eme atụmatụ itinye ego RMB 5 ijeri iji guzobe Guangzhou Greater Bay Area Rail Transit Industry Investment Group Co., Ltd.
Okike ohuru nke ohuru ohuru nke etinyere ohuru
Rlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ike Ọhụrụ International (IRENA) wepụtara akụkọ Renewable Capacity Statistics 2021 na nso nso a, na-egosi na 260GW nke ikike ikike ume ọhụrụ, ndekọ ọhụrụ, agbakwunyere ụwa niile na 2020, ihe ruru 50 pasent site na afọ gara aga.
Ngwaọrụ akpaka nwere ike inye nkwa nchekwa dị mkpa maka nrụpụta ọrụ ụlọ ọrụ, ma kwalite nrụpụta dị mma ma kwụsie ike. Taa ka a ga-ewebata ihe dị mkpa maka ịkatọ ụdị ngwa nkịtị, nke nwere ike ịbara gị uru!
Usoro waya nke njikwa okpomọkụ
Usoro ntanetị nke njikwa na-achịkwa - Wiring Diagram of Controller Onyinye ike nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma mgbe wires na-ejikọ. Ndị na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma dị mgbagwoju anya nwere ọrụ ndị ọzọ, ọkachasị na-enye akara na mita nke abụọ na ndị na-edekọ ihe, ma ọ bụ mgbaàmà mgba ọkụ na mpụga. Eriri dị mfe mgbe ịmara ọrụ nke mita ahụ.